Ny amboara FA: izay rehetra tokony ho fantatrao alohan'ny quarterfinals - teles relay
Ny amboara FA: Izay rehetra tokony ho fantatrao mialoha ny ampahefa-dalana
By bryanekobe Last nohavaozina Jona 28, 2020
Manodidina ny 114 andro taorian'ny fandresena famaranana fahadimy tao Manchester United tao Derby County tamin'ny 5 martsa, niverina tamin'ny Sabotsy ny FA Cup tamin'ny voalohany tamin'ny finoazaka am-pilalaovana Premier League.
Lalao Norwich City miaraka amin'ireo mpandresy 12 United ao amin'ny Carrow Road (17:30 p.m. BST) - lalao iray azonao jerena mivantana amin'ny BBC One - manamarika ny fiverenan'ny fifaninanana, izay tapaka noho ny areti-mifindra coronavirus .
Ny BBC koa dia mampiseho ny Newcastle United hiady amin'ireo mpitahiry ny tanànan'i Manchester - ny iray amin'ireo telo natao tamin'ny alahady.
Ka iza no mijanona amin'ny fifaninanana malaza? Iza amin'ireo roa amin'ireo ekipa valo sisa no maniry handresy voalohany? Rahoviana no hanao ilay lalao semi-final ary oviana no famaranana? Hisy refazy reruns?
Eto, ny BBC Sport dia milaza aminao izay rehetra tokony ho fantatrao rehefa miomana hiverina ny amboara FA.
Fa maninona no misy ny ampahefa-dalana amin'ny volana jona?
Ny andiany ho an'ny ampahefa-dalana no nisesy tamin'ny 4 martsa ary ny lalao efatra no am-piandohana ho an'ny 21 sy 22 martsa.
Nihemotra avokoa izy ireo taorian'ny fampiatoana ny baolina kitra tany Angletera noho ny areti-mifindra coronavirus.
Ny FA dia nanambara tamin'ny faran'ny Mey ny daty famerenana vonjimaika manomboka ny 27 ka hatramin'ny 28 jona, miaraka amin'ireo rohy sisa tavela amin'ity vanim-potoana ity mba hilalao ao ambadiky ny varavarana mihidy.
"Ny fifaninanana dia ampahany tsy manam-paharoa amin'ny kalandrie baolina kitra anglisy efa ho 150 taona, ary tianay ny misaotra ny ekipan'ny Premier League sy ireo klioba tamin'ny fanohanan'izy ireo ny fandaharam-potoana ireo lalao sisa tavela tamin'ity vanim-potoana tsy mbola nisy ity," hoy iany. ny CEO ny FA. Mark Bullingham.
Tompondakan'ny FA Cup
Isan'ny isaky ny klioba
Fandresena farany amin'ny famaranana £ 720,000
Ireo mpanakanto any amin’ny manasa-dalana £ 900,000
Fandresena semi-final £ 1,8m
Finalists an'ny amboara FA £ 1,8m
Nandresy ny amboara FA £ 3,6m
Rahoviana ny draw ary aiza ny semi-finals sy ny famaranana?
Amin'ny lalao antsasaky ny famaranana amin'ny ampahefa-potoana Newcastle hamelezana an'i Manchester City amin'ny alahady, ity haino aman-jery farany ity, izay alefa mivantana amin'ny BBC One.
I Alan Shearer nandroso teo aloha, Alan Shearer, izay hiditra ao amin'ny ekipan'ny BBC ao amin'ny St James 'Park, no hisarika ny antsapaka.
Noho ny fitsipi-dàlana sosialy dia apetraka roa metatra fara-fahakeliny roa metatra avy amin'ny tsirairay sy ireo andiany ireo mpitsidika BBC sy mpanolotra an'i Gary Lineker.
I Shearer, kapiteny anglisy taloha, no izy irery no mitantana ny baolina mandritra ny lalao, ary ny loto rehetra sy ny fitaovana alohan'ny draw dia ho voaroaka tanteraka.
Ny lalao manasa-dalana, hatao any Wembley, dia ny faran'ny herinandro 18-19 jolay, miaraka amin'ny famaranana amin'ny asabotsy 1 aogositra ao Wembley - enina andro aorian'ny andro farany amin'ny vanim-potoana Premier League on 26 Jolay. .
Ny famaranana amin'ity taom-pilalaovana ity dia hatao anarana ny tompon-dakan'ny Heads Up FA Cup mba hanairana ny saina momba ny fahasalamana ara-tsaina.
Nanomboka ny nandresen'i Manchester City taorian'ny nandreseny an'i Watford 6-0 tao Wembley tamin'ny 18 Mey 2019
Misy reruns ve?
Tsy misy naoty fisian'ity fifaninanana ity.
Raha mihoatra ny 90 minitra ny lalao dia hisy fotoana fanampiny 30 minitra fanampiny.
Nisy ny fanapoahana sazy izay hanaparitahana mpandresy raha mbola mihena hatrany amin'ny 120 minitra ny lalao.
Iza no lasa?
Ekipa telo amby telopolo sy fito no niditra tamin'ny fifaninanana tamin'ity taom-pilalaovana ity, ny amboara FA nanomboka ny 9 aogositra 2019 niaraka tamin'ny fihodinana voalohany.
Ekipa roa an'ny ligy tsy fantatra - Hartlepool United sy AFC Fylde - tonga tamin'ny fihodinana fahatelo, raha nesorina tamin'ny fihodinana fahadimy kosa ireo ekipa enina tsy Premier League voalohany.
Norwich City, klioba ambany indrindra, ary Leicester City no klioba roa sisa no nandresy ny amboara FA, raha Arsenal sy Manchester United kosa no nandresy 25 isa teo amin'izy ireo.
Norwich (mampiantrano an'i Man Utd, asabotsy 17:30 p.m. BST)
Position - faha-20 ao amin'ny Ligy Premier. Nandresy ny amboara FA - 0 La ny farany dia nahatratra ny ampahefa-dalana - 1992. Inona no nitranga? Norasan'ny Norwich City tamin'ny fanatrarana fanintelony, tamin'ny vanim-potoana efatra, taorian'ny nandreseny an'i Southampton ho fanarenana, talohan'ny nahavitany an'i 1-0 tamin'ny Sunderland tamin'ny lalao famaranana tamin'ny semifinal, tany Hillsborough.
Ahoana no nahatratr'i Norwich tamin'ny ampahefa-dalana
Fahatelo fahatelo Preston (tsy eo) 4-2
Fahatelo fahefatra Burnley (lavitra) 2-1
Fihodinana fahadimy Tottenham (tsy eo) 1-1 (nandresy tamin'ny 3-2 niaraka tamin'ny penina)
Sakantsakana bebe kokoa noho ny fanampiana? Any amin'ny faran'ny latabatra Premier Premier misy lalao fito amin'ny filalaovana, tsy manam-potoana hanavotana ny tenany amin'ny fiverenana haingana amin'ny Championship ny Canaries. Na izany aza, dia mankafy ny hazakazaka amboarany FA tsara indrindra izy ireo ao anatin'ny 28 taona. Ny fotoana farany nihaonan'i Norwich sy Manchester United tamin'ny fifaninanana dia tamin'ny fihodinana fahefatra tamin'ny taona 1994, nandresy ny 2-0 tao amin'ny Carrow Road ny Red Devils tamin'ny taona XNUMX, nandrombaka ny amboara tamin'io vanim-potoana io.
Cup Cup: Tottenham Hotspur 1-1 Norwich City (2-3 penina)
Statistika fototra: Tsy nahazo fandresena i Norwich tamin'ny lalao tokatran'ny FA Cup farany (D3 L4) farany taorian'ny nandresena 4-1 an'i Burnley tamin'ny Janoary 2012.
Manchester United (tsy tao amin'ny Norwich, ny asabotsy 17 p.m. BST)
Postition - fahadimy amin'ny Lalao Premier. Nandresy ny amboara FA - in-12. Tonga tany amin'ny quarterfinals ny fotoana farany - 2019. Inona no nitranga? Nahazo karatra mena ny depiote Victor Lindelof raha nandresy 2-1 teo amin'ny Wolves any Molineux ny ekipan'i Ole Gunnar Solskjaer.
Ahoana ny nahatratrarana an'i Man Utd tamin'ny amperinasa
Fahatelo fahatelo Biby (lavitra) 0-0
Famerenana ny fihodinana fahatelo Biby (ao an-trano) 1-0
Fahatelo fahefatra Tranmere Rovers (ivelany) 6-0
Fihodinana fahadimy Faritanin'i Derby (any ivelany) 3-0
Trofiara voalohany ho an'i Solskjaer? Ole Gunnar Solskjaer dia nandresy ny amboara FA indroa tamin'ny maha mpilalao azy tany United, fa hahomby amin'ny fifaninanana amin'ny maha mpitantana ve ny Norvezianina? Tsy naharesy tropy goavana tamin'ny fifaninanana tamin'ny taona 2017 i United tamin'ny nandresen'izy ireo ny amboara Tompondaka League sy ny «Europa League» tamin'io vanim-potoana io notarihin'i Jose Mourinho.
Hevitra Misongadina ao amin'ny FA Cup: Derby County 0-3 Manchester United
Antontan'isa fototra: Mandray anjara amin'ny ampahefatry ny amboara amin'ny ampahefa-taona faha-enina ny Manchester United mandritra ny vanim-potoana fahenina manaraka, na dia nahavita nandroso amin'ny lalao semi-finale aza izy roa tamin'ny vanim-potoana dimy teo aloha.
Sheffield United (mpampiantrano ao Arsenal, alahady 13:00 p.m. BST)
Position - fahavalo ao amin'ny Ligy Premier. Nandresy ny amboara FA - in-4. Tonga tany amin'ny quarterfinals ny fotoana farany - 2014. Inona no nitranga? Ekipa Ligue 1 ny Blades tamin'ny nandresen'izy ireo an'i Charlton 2-0 hamaky ny oniversite Wembley hanohitra an'i Hull City, izay resy 5-3.
Ahoana no nahatratrarana an'i Sheff Utd
Fahatelo fahatelo AFC Fylde (trano) 2-1
Fahatelo fahefatra Millwall (lavitra) 2-0
Fihodinana fahadimy Famakiana (ivelany) 2-1 (aorian'ny fotoana fanampiny)
Ny fehiloha voninahitra? Izy io dia vanim-potoana niavaka ho an'ny Blades rehefa miverina amin'ny Ligy Premier izy ireo rehefa mitady toerana any Eropa. Hifarana amina helika lehibe iray ve izany? Sheffield United sy Arsenal dia nilalao farany tamin'ny amboara FA tamin'ny volana martsa 2005 nandritra ny fanarenana fihodinana fahadimy. Taorian'ny lalao tsy nahy, ny Gunners dia nahazo 4-2 tamin'ny sazy tao Bramall Lane.
Fiadiana FA: Famakiana fanitarana 1-2 Sheffield Serasera
Statistika fototra: Ity no lalao faha-35 an'ny filohan'ny Blades Chris Wilder ho mpiandraikitra ny amboara ny FA Cup, fa ny faharoa ihany no nanohitra ny klioban'ny Lalao Premier - Sheffield United izay very 1-0 tany Leicester City tamin'ny fihodinana fahadimy tamin'ny 2018.
Arsenal (tsy tao amin'ny Sheffield United, alahady 13:00 p.m. BST)
Position - fahasivy eo amin'ny Ligy Premier. Nandresy ny amboara FA - in-13 (firaketana). Tonga tany amin'ny quarterfinals ny fotoana farany - 2017. Inona no nitranga? Beat Lincoln City tsy liga 5-0 amin'ny làlana mankany amin'ny fandresena amin'ny fandresena an'i Chelsea tamin'ny famaranana, tamin'ny alàlan'ny fandresena semi-final tamin'ny Manchester City.
Ahoana no nahatrarana Arsenal tamin'ny ampahefa-dalana
Fahatelo fahatelo Leeds United (trano) 1-0
Fahatelo fahefatra Bournemouth (lavitra) 2-1
Fihodinana fahadimy Portsmouth (lavitra) 2-0
Hahazo ny fandresena faha-14 ve ny Gunners? Tsy nisy klioba nandresy ny amboara FA mihoatra ny Arsenal. Ny farany indrindra tamin'ny fahombiazan'izy ireo 13 dia tamin'ny taona 2017 rehefa naharesy fandresena tamin'ny amboara teo amin'i Chelsea Ram i Aaron Ramsey mba hahazoana an'i Arsene Wenger ny fandreseny amin'ny amboara FA fahafito azy.
Cup Cup: Portsmouth 0-2 Hevitra Misongadina ao Arsenal
Antontan'isa fototra: Nivoatra i Arsenal nanomboka tamin'ny 13 tamin'ny lalao ampahefatry ny amboara farany tamin'ny FA FA.
Leicester City (mandray an'i Chelsea, alahady 16 p.m. BST)
Position - fahatelo ao amin'ny Ligy Premier. Nandresy ny amboara FA - 0 La ny farany dia nahatratra ny ampahefa-dalana - 2018. Inona no nitranga? Very ny 2-1 taorian'ny fotoana fanampiny tao an-trano hanoherana an'i Chelsea, izay nahazo ny fifaninanana.
Ahoana no nahatongavan'i Leicester tamin'ny ampahefa-dalana
Fahatelo fahatelo Wigan (trano) 2-0
Fahatelo fahefatra Brentford (lavitra) 1-0
Fihodinana fahadimy Birmingham City (trano) 1-0
Famaranana ny amboara FA voalohany nandritra ny 51 taona? Fotoana manokana ho an'i Leicester io na dia mbola tsy naharesy lalao aza izy ireo nanomboka ny fiverenan'izy ireo tamin'ny fiandohan'ity volana ity. Miorina tsara amin'ny sehatry ny Tompondaka Champions ny Foxes raha toa izy ireo mandresy roa avy hatrany amin'ny famaranana ny fiadiana ny amboaran'ny FA voalohany tamin'ny 1969, rehefa resy 1-0 ho any Manchester City.
Fiadiana FA: Tanànan'i Leicester 1-0 Birmingham City Misongadina
Statistika fototra: Leicester City dia mitady ny hamonjy ny ampahefa-dalan'ny FA Cup voalohany nanomboka tamin'ny fampielezan-kevitra tamin'ny 1981-82 - izy ireo dia nesorina tamin'ny faran'ny amboara amin'ny amboara FA nanomboka teo.
Chelsea (tao Leicester, alahady 16:00 p.m. BST)
Position - fahefatra ao amin'ny Ligy Premier. Nandresy ny amboara FA - in-8. Tonga tany amin'ny quarterfinals ny fotoana farany - 2018. Inona no nitranga? Resy leicic Leicester 2-1 taoriana kelin'izay handresy ny fifaninanana tamin'ny fandresena an'i Manchester United tamin'ny famaranana.
Ahoana ny fahatratrarana an'i Chelsea tamin'ny ampahefa-dalana
Fahatelo fahatelo Ala any Nottingham (trano) 2-0
Fahatelo fahefatra Hull City (lavitra) 2-1
Fihodinana fahadimy Liverpool (trano) 2-0
Trofiara ho an'i Lampard amin'ny vanim-potoana voalohany? Taorian'ny nanesorana ny Liverpool tamin'ny fihodinana farany, ho hitan'i Chelsea ny vintana amin'ny famaranana ny vanim-potoana voalohany an'i Frank Lampard izay tompon'antoka amin'ny amboaram-pirenena. Tsy naharesy roa tamin'ny lalao 20 farany nataony i Chelsea tamin'ny Leicester tamin'ny fifaninanana rehetra (W13 D5 L2), na dia nandresy efatra aza ry zareo tamin'ny Foxes (D3 L1).
Fiadiana ny FA: Chelsea 2-0 Liverpool nanasongadina
Antontan'isa fototra: Ity dia ny ampahefatry ny am-polo voalohany amin'ny FA FA Cup an'ny Chelsea tamin'ny fotoana tamin'ny Premier League (nanomboka tamin'ny 18-1992), mihoatra ny ekipa hafa. Nandroso enina tamin'ny lalao fito farany nataony ry zareo, resy ny iray tamin'ny taona 1993 tany Everton.
Newcastle United (mampiantrano an'i Manchester City, alahady 18:30 p.m. BST)
Position - faha-13 ao amin'ny Ligy Premier. Nandresy ny amboara FA - in-6. Nahatratra ny ampahefa-dalana ny farany - 2006. Inona no nitranga? Very tamin'ny 1-0 tao Chelsea, ny vokatra dia nifarana ny fanantenan'ny Kapiteny Shearer ny hahazo tropy niaraka tamin'i Newcastle.
Ahoana no nahatratr'i Newcastle tamin'ny ampahefa-dalana
Fahatelo fahatelo Rochdale (ivelany) 1-1
Famerenana ny fihodinana fahatelo Rochdale (trano) 4-1
Fahatelo fahefatra Oxford United (trano) 0-0
Fivoriana fihodinana fahefatra Oxford United (ivelany) 3-2 (aorian'ny fotoana fanampiny)
Fihodinana fahadimy West Brom (lavitra) 3-2
Ny Magpies dia nanana ny tantarany Cup Cup tsara indrindra tao anatin'ny 14 taona ary tsy resy tamin'ny telo amin'ireo lalao efatra farany natao nanoherana ny Manchester City. Navoakan'i Miguel Almiron nandroso be dia be ny amboara FA Cup noho ny mpilalao rehetra amin'ny Ligy Premier tamin'ity vanim-potoana ity, ka inefatra no nahavoa in-droa tamin'ny enina tifitra fotsiny.
FA Cup: West Brom 2-3 Hevitra Misongadina
Statistika fototra: Newcastle United dia tsy nahatratra ny ampahefa-dalan'ny amboaran'ny FA hatramin'ny 2004-05 teo ambany fitantaran'i Graeme Souness.
Manchester City (tsy eo amin'ny Newcastle, alahady 18 p.m. BST)
Position - faharoa amin'ny Ligy Premier. Nandresy ny amboara FA - in-6. Tonga tany amin'ny quarterfinals ny fotoana farany - 2019. Inona no nitranga? Notaritarihan'i Swansea 2-0 talohan'ny nanodihany intelo tamin'ny 19 minitra - nahitana fandresena iray nataon'i Sergio Aguero tamin'ny minitra faha-89 - teny an-dalana ho amin'ny fandresena.
Ahoana ny nahatongavan'i Man City tamin'ny ampahefa-dalana
Fahatelo fahatelo Port Vale (fandraisana) 4-1
Fahatelo fahefatra Fulham (trano) 4-0
Fihodinana fahadimy Sheffield alarobia (tsy eo) 1-0
Kaopy nasionaly roa ho an'ny Tanàna? Nahazo ny amboara «Carabao» taoriana kelin'ny nanemorana ny baolina kitra dia napetraka tsara i Manchester City hamita ny ampaham-pahefana isam-bolana. Fa ahoana no hataon'izy ireo raha tsy misy ilay mpilalao goavambe malaza Sergio Aguero, izay nandalo fandidiana ny lohalika?
Cup Cup: Sheffield alarobia 0-1 famintinana ao amin'ny tanànan'ny Manchester
Antontan'isa fototra: hatramin'ny naharesy an'i Wigan Athletic tamin'ny fihodinana fahadimy tamin'ny amboara fahadimy tamin'ny volana febroary 2018, nandresy ny lalao amboara FA sivy farany azony i Manchester City tamin'ny isa 35-4.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://www.bbc.com/sport/football/53152134
Fotoam-pahavaratra amin'ny tsirin-dàlana amin'ny fahavaratra sy tsaramaso voanjo - New York Times